Barcelona Oo Wadahadallo Kula Jirta Xavi – Garsoore Sports
Barcelona Oo Wadahadallo…
Kooxda kubbada-cagta ee Barcelona ee dalka Spain ayaa wadahadallo la furay cayaaryahankoodii hore ee Xavi Hernandez si ay beddel uga dhigan Tababare Ronald Koeman.
Inkastoo uu heshiis cusub u saxiixay kooxda Al-Sadd maalmo kahor, hadana warbixin ka soo baxday gobolka Catalonia ayaa soo jeedineysa in ay kooxda Barcelona wadahadalo la furtay Xavi si ay u hesho badalka tababaraha haatan ee Ronald Koeman xagaagan.
Koeman ayaa macsalaameeyay fursadiisa hanashada horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan kaddib markii kooxdiisa ay ku dhacday guuldarro 2-1 ka soo gaartay Celta Vigo axaddii, isagoo hubinaya in tababaraha reer Holland uu waayey mid ka mid ah qalabkiisii ugu weynaa ee gorgortanka isagoo doonaya inuu ka dhaadhiciyo madaxweynaha cusub ee Joan Laporta inuu yahay ninka ku haboon shaqada.
Dhammaan musharaxiintii badali laheyd Koeman, ayuu halyeeyga kooxda ee Xavi had iyo jeer u muuqday midka ugu macquulsan, balse wuxuu qandaraas cusub oo labo sano ah oo u saxiixay kooxda Qatar ee Al-Sadd.
Si kastaba ha noqotee, ARA Sports ayaa sheegeysa in Xavi uu durbaba la hadlayo Laporta waxaana lagu wadaa inuu kulan la yeesho madaxweynaha maalmaha soo socda si ay uga wada hadlaan ku soo laabashada Camp Nou.
RAC1 sidoo kale waxay intaas ku dartay in Laporta uu xoojiyay raadinta tababare cusub kaddib markii uu go’aansaday in Koeman uusan ahayn ninka saxda ah.
Macalinkan reer Holland ayaa la filayaa inuu bixiyo amarradiisa socodsiinta, haddii la waayo beddelkiisa taas oo noqon doonta xalka kaliya ee uu kusii joogi karo garoonka Camp Nou ee Barcelona.